Nampiato ny fandoavan-ketra i Lufthansa hamerana ny fiatraikany ara-bola amin'ny krizy virus coronavirus
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Nampiato ny fandoavan-ketra i Lufthansa hamerana ny fiatraikany ara-bola amin'ny krizy virus coronavirus
Mandritra ny fivoriana anio, ny Birao Mpanatanteraka ao Deutsche Lufthansa AG nanomana ny fanambarana ara-bola isan-taona ho an'ny taona 2019 ary nanapa-kevitra ny hanolotra ny fivoriana isan-taona fa hampiato ny fandoavana dividend amin'ny taona ara-bola 2019.
Ny vondrona Lufthansa dia nanidy ny taona 2019 tamin'ny EBIT EUR 2,026 tapitrisa novaina. Ny maridrefy EBIT novaina dia 5.6 isan-jato, ao anatin'ny elanelan'ny 5.5 isan-jato ka hatramin'ny 6.5 isan-jato tombana nomena tamin'ny Jona 2019.
Ny fanaparitahana ny Coronavirus dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fangatahana eran-tany momba ny dia an-habakabaka. Tafiditra ao anatin'izany ny fameperana ny dia ho an'ny mpandeha izay avy amin'ny Vondrona eropeana napetraky ny manampahefana amerikana omaly. Nandritra ny herinandro lasa teo, ny famandrihana vaovao tao amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Group dia manodidina ny 50 isan-jato ambany, raha oharina amin'ny tamin'ny taon-dasa. Ankoatr'izay, ny orinasam-pitaterana an'habakabaka dia mirakitra fiakarana lehibe amin'ny isan'ny fanafoanana ny sidina.
Mandritra ny herinandro vitsivitsy manaraka, ny fandaharam-potoanan'ny sidina dia mety hihena hatramin'ny 70 isan-jato raha oharina amin'ny drafitra voalohany. Ny vondrona koa dia mampihena ny vidin'ny fitaovana sy ny tetikasa, mikasa ny hampihatra ny ora fihenan'ny asa ("Kurzarbeit"), ary mifampiraharaha amin'ny fanemorana ny fampiasam-bola kasaina hatao. Na eo aza ireo fanoherana ireo, andrasan'ny Vondrona ny EBIT voarindra amin'ny taona 2020 dia ho ambanin'ny valin'ny taona teo aloha.
Raha raisina ny fomba fijery ara-bola an'ny Vondrona sy ny krizy miavaka atrehin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, ny tolo-kevitra fampiatoana ny dividend ho an'ny taom-piasana 2019 dia taratry ny fifantohana amin'ny fitehirizana ny vola azo. Ny politika ifotoran'ny Vondrona amin'ny fizarana 20 ka hatramin'ny 40 isanjaton'ny tombom-barotra dia mijanona tsy misy fiatraikany.
Mba hiantohana ny toerany ara-bola matanjaka dia nanangona vola fanampiny manodidina ny 600 tapitrisa EUR ny vondrona tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ny Group dia manana vola mitentina manodidina ny 4.3 miliara EUR. Ankoatr'izay, manodidina ny 800 tapitrisa EUR ny crédit mbola tsy ampiasaina. Eo am-panangonana vola fanampiny izao ny Vondrona. Ankoatra ny zavatra hafa, hampiasa famatsiam-bola ho an'ny tanjona ny vondrona. Lufthansa Group dia manana 86 isan-jaton'ny andian-tafiny. Saika 90 isan-jaton'ny sambo fananana no tsy misy mpamokatra. Mifanitsy amin'ny sandan'ny boky manodidina ny 10 XNUMX tapitrisa EUR.
Ny Vondrona Lufthansa dia hanao tatitra amin'ny antsipiriany momba ny fampivoarana ny asa amin'ny taona 2019 sy ny fomba fijery ny taona 2020 amin'ny 19 martsa. Ny tatitra isan-taona dia havoaka amin'io andro io ihany.